MA KULMIYAA MA WADDANI, MA MUUSE MISE CIRRO, KUMA AYAA SHACABKU U CUMAAMADI 2017? |
MA KULMIYAA MA WADDANI, MA MUUSE MISE CIRRO, KUMA AYAA SHACABKU U CUMAAMADI 2017?
Saadaasha noocan ah ee ka hor-dhacda ololaha doorashada waxa la yidhaa ‘’Benchmark Polls’’, waana qayb ka mid ah nooc saadaasha siyaasaddu leedahay oo la yidhaa ‘’Regression Polls Model’’.
Inta badan waxa sameeya dadka cilmiga siyaasadda lafa-gura, isla markaana darsa, gaar ahaan Political Pundits kuwa la yidhaa. Iyada oo la adeegsannayo Sample Data nooceeda loo yaqaan Multilevel Regression Post-Ratification (MRP). Ujeedadu waa in lafa-guris iyo faaqiddis badani la socoto xogta la helay si ay mustaqbalka oddoros fiican u beegsan karto.
Sidaa marka ay tahay waa in la raadiyo ‘’sample group’’ ku filan iyo nuxur mug leh, oo sax ka dhigi kara macluumaadka la hayo, iyada oo lagu kabayo taariikhda dalka iyo dadka, dhaqanka-siyaasadda ee ummada iyo awoodda labada dhinac ee loolanku ka dhex jiro.
Si taa loo xaqiijiyo xisaab ahaan waa in la sameeyo qiyaas shan-gees lay ah oo bulshada kala duwannaanshaheeda lagu bartilmaameedsannayo. Tusaale ahaan, intaa ayaa dhallinyar ah, haween ah amma waayeel ah. Waxa iyana xusid mudan in macno weyn sameeyaan tirada dadka shaqeeya iyo kuwa camal la’aanta ah iyo waliba xaga ay u jeestaan iyaga oo rajeeyayaal amma naawillayaal mustaqbal ah.
Haddaba maxaan u adeegsaday saadaasha tan? Waxa aan u adeegsaday marka hore in wakhti badan la siiyo uruurrinta ‘’subject of sample groups’’. Intaa marka la dhammeystiro waa in loo gudbo tirada dadka ku nool iyo filashada inta coddeyn karta.
Somaliland waa afar milyan wax ka yar. Waxa coddeeya inta u dhexaysa 500,000 ilaa 650,000 marka aad eegto doorashooyinkii 2002 ilaa 2012. Maxaa ‘’sample’’ noqon kara? Waxa noqon kara ugu badnaan 650 qof ugu yaraanna 400 oo qof. Halka Ethiopia iyo Kenya looga baahannayo in ka badan 1,500 ilaa 2,000 si tirada dad iyo waaqacu isugu xidhmo.
Intaa laga ma badin karo bulshada oo yar awgeed. Halkaa marka la jooggo waxa aan u dhaqaaqnay aniga iyo tiimkii hawsha ila waday in aan su’aallaha xogta keenaya (questionaires of data gathering) bilowno. Saddex goor oo kala duwan ayaan hawsha tan oo ammuuro kale wehelliyaan Somaliland ugu baxay.
Iyada oo la raacayo anshaxa (ethical considerations) waxa aan la wadaaggaynay dadka afar su’aallood:-
Gobolkeed ka soo jeedaa? Beeshaada ma na la wadaaggi kartaa? Ma is-diiwaan-galisay? Yaad u coddaynaysaa?
Qof wal oo jawaab u hela waxa aan galineynaa box hadhow calaamad looga dhigo tiro ahaan, ee aan wax intaa ka badan loo isticmaallin xogtiisa. Epistemological Assumptions ka aan raacney iyo Methodologies ka aan adeegsannay aan halkaa ku dhaafo. Si guud gobollada dalka aan u galno iyo saadaasha ka soo baxday jawaabbaha dadka, oo aan ku rakibnay dhaqanka siyaasiga ah iyo hab-fekerka ummada ee xilliga doorashooyinka.
Awdal waxa uu Kulmiye ka heli karo marka laga qiyaas qaato dadka saadaasha laga sameeyey waxa ay noqotay 43.75%, haddii hadda sida ay wax yihiin doorasho lagu galo. Sidoo kale Waddani 52.5% ayuu ka heli karaa marka iyana lagu oddoroso ‘’Regression Model’’ ka saadaasha. Waxa jirta tiro aan go’aan ka gaadhin coddaynta oo noqotay 3.75%.
Awdal sample ka aan helnay waa 80 qof. Waxa ay kala jooggeen Hargeysa iyo Boorama, laakiin waxa ay iska diiwaan-galiyeen Awdal oo hadhow ay ka coddayn doonaan. Gobollada kalena sidaa ayaana dadka qaar kood uga helnay Hargeysa iyaga oo ka kala yimi meelo kala duwan, oo ay iska diiwaan-galiyeen.
Maroodi jeex waxa uu Kulmiye ka heli karo wakhtiga saadaasha 54.5%. Halka uu Waddani 28% ka helay. Tirada aan go’aanka gaadhin wali waa 17.5%. Sample ka gobolku waa 275.
Saaxil waxa uu Kulmiye ka heli karayey wakhtiga saadaasha 64.6%. Waddani waxa uu ka dheefay 27.7%. Tirada aan go’aan gaadhin wali waa 7.7%. Sample ka gobolku waa 65.
Sanaag waxa uu Kulmiye ka heli karayey wakhtiga saadaasha 46.6%. Waddani waxa uu ka heli karayey wakhtiga saadaasha 52%. Tirada aan go’aanka wali gaadhin waa 1.4%. Sample ka gobolku waa 75.
Sool waxa uu Kulmiye ka heli karayey wakhtiga saadaasha 50.9%. Waddani waxa uu ka heli karayey wakhtiga saadaasha 30.9%. Tirada aan go’aan wali gaadhin waa 18.2% Sample ka gobolku waa 55.
Togdheer waxa uu Kulmiye ka heli karayey wakhtiga saadaasha 48%. Waddani waxa uu ka heli karayey isna 50%. Tirada aan go’aanka wali gaadhin waa 2%. Sample ka gobolku waa 100.
Tirada guud ee Kulmiye ka heli karayey gobollada waddar ahaan waa 52%. Halka Waddani ka yahay 37.4%. Tirada aan go’aanka si guud gobollada dalka u gaadhin waa 10.6%. Sample ka ay kala helaan waa Kulmiye 338, iyo Waddani oo 243, inta aan wali dhinac raacin waa 69.
Sidoo kale dhaqan-siyaasaddeeka iyada oo la raacayo, waxa aan saadaasha ku darney qabaa’ilka Somaliland iyo sida ay ugu kala coddaynayaan xisbiyada Somaliland.
Habar-Jeclo: Kulmiye 75.8%, Waddani 10.4%. Inta aan wali go’aan qaadan 13.8%. Sample ka guud 145. Darreenka beeshan wax badani iska beddeli maayaan, haddii ay iska beddelaan dhanka Kulmiye ayey u sii cirri doontaa.
Subeer Awal: Kulmiye 86.2%, Waddani 3.5%. Inta aan wali go’aan qaadan waa 10.3%. Sample ka guud 145. Beeshan inta aan go’aanka wali gaadhin waxa ay u badan doonaan Kulmiye.
Garxajis: Kulmiye 6.9%, Waddani 82.7%. Inta aan wali go’aan qaadan waa 10.4%. Sample ka guud 145. Beeshan saadaasheedu way is beddeli doontaa, waxa na masuul ka noqon doona hadba xisbiga Ucid, oo aan wali kala miir-dillaacin.
Samaroon: Kulmiye 40%, Waddani 48.6%. Inta aan wali go’aan qaadan waa 11.4%. Sample ka guud 70. Beeshan waxa ay ku xidhnaan doonta sida looga dhex ololaysto waxa se mar walba ay ku xidhan tahay sida ay ishaa fadhataysiga siyaasi ah isu daad raacin doonaan.
Dhulbahante: Kulmiye 51.%, Waddani 16.3%. Inta aan wali go’aan qaadan waa 32.7%. Sample ka guud 49. Beeshan oo ah mid aan hore badi u coddeyn maanta se miisaan soo kordhay oo siyaasi ah noqotay, wali natiijadeedu way laalan tahay. Waxa ay badi ku xidhnaan doontaa xisbiga Ucid.
Arab: Kulmiye 40%, Waddani 50%. Inta aan wali go’aan qaadan waa 10%. Sample ka guud 40. Beeshan oo ah taageerro Kulmiye ka jabtay, waxa fara-farayn doonaa kursiga Xirsi, sidoo kale axsaabta oo la furi doono 2022, iyo Jirde oo aan guusha Waddani iyo guul-darrada waddani midna aan cimri sugsiiya lahayn ayaa wax badan janjeedhin doona.
Ciise: Kulmiye 50.%, Waddani 22.3. Inta aan go’aan qaadan waa 27.7%. Sample ka guud waa 18. Beeshan sannadkan waxa ku jirtaa beellaha is diiwaan galiyey, dawladnimada oo ay inta badan la socdaan ayaa keenaysa in ay dhankaa Kulmiye u liicaan.
Warsangeli: Kulmiye 38.5%, Waddani 15.4%. Inta aan go’aan qaadan waa 46.1%. Sample ka guud 13. Beeshani ma aha beel is-diiwaan galisay, codkeedu marnaba noqon maayo mid badan. Laakiin deegaanka oo aan is indho buuxin iyo Waddani oo aan lahayn haldoor uga ololeeya, waxa ku horreyn doona Kulmiye.
Ayuub: Kulmiye 62.5%, Waddani 25%. Inta aan go’aanka gaadhin 12.5%. Sample ka guud waa 8. Beeshani wali heshiiskii Kulmiye ay kula socotay oo 14 jirsaday melena uga ma bixin.
Toljecle: Kulmiye 62%, Waddani 25.5%. Inta aan go’aan qaadan waa 12.5%. Sample ka guud waa 8. Beeshani waxa ay la darreen tahay mar walba Bariga Burco. Sidoo kale Galbeedka Hargeysa xidhiidh fiican oo taariikhi ah ayaa ka dhexeeya, halkii hore ayey gogashu u ooli doontaa.
Gabbooye: Kulmiye 16.7, Waddani 50%. inta aan go’aan qaadan waa 33.3%. Sample ka guud waa 6. Beeshani waa ay ka qixi doontaa Kulmiye, iyada oo dulmi loo gaystay ka carraraysa ayey u jabi doontaa dhankaa iyo Waddani.
Fiqishinni: Kulmiye 50%, Waddani 50%. Inta aan go’aan qaadan waa 0%. Sample ka guud waa 2. Inkasta oo beeshani heshiis fiican hadda kula jirto Kulmiye iyo xukuumaddiisa, haddana deegaanka Waddani oo meelo badan ay isaga xidhan yihiin baaney marnaba Waddani u qadin doonin.
Madigaan: Kulmiye 100%, Waddani 0%. Sample ka guud waa 1. Beeshani waa hal daba la’ iyo xisbiga Kulmiye, waana beel heshiis la ah deegaanka ku hareerraysan oo dhan, deegaan kaas oo ah ka maanta codka ka doonaya.
IS-BAHAYSIGA IYO KOONFURTA HARGEYSA
Sida samples ka ku cad is-bahaysigu wax badan soo kordhin maayo, sababtu waxa ay tahay, waa siyaasiyiin la tijaabiyey oo wanaag iyo xumaan ba leh. Dhanka kale waa gurraan gur aan dhaqan siyaasaddeedka hab- beelleedka ah aan hal meel kaga wada xidhmi karin. Sidoo kale siyaasiyan cararkoodu hab wax wanaajin ah uma muuqdo se waxa uu taa beddelkeeda loo qaadan karaa mid aarsi salka ku haya. Inta ay taageerro la tagaan in le’eg ayaa uu ku waayi doonaa Waddani. Taas ayaana ka dhigaysa kuwa aan wax badan ku soo biirrin karin xisbiga.
Dhanka kale siyaasiyiinta Koonfurta Hargeysa, xisbiga Waddani waa kuwa taageerro ahaan aad kor ugu soo qaaday. Inkasta oo laga yaabo in dadka intiisa badani aaney dhaadin ammuurtaa. Sida ay xogtu tilmaameyso wax badan ayey xisbiga Waddani ku soo kordhiyeen kooxdani. Laakiin ma noqn doontaa mid sidaa ku joogta, haddii xisbiga Ucid uu Faysal ku soo laabto, waa su’aal furran oo u baahan degganaanshiyo iyo maskax carrin hor leh.
BULSHADA QAYBBAHEEDA KALA DUWAN.
Waxa kale waxa aad ka dheehan kartaa saadaasha chart ka sida ay dumarka iyo dhallinyaradu ula kala safan yihiin labada xisbi. Dumarku inta badan waxa la yidhaa waa caadifiyiin, iyaga ayaana u badan dadka inta coddaysa, dhallintu iyagu laba xoog ayey leeyihiin, waa ka hore e, waxa ay saameeyaan maskixiyan dookha dumarka, marka labaad waa xoog miisaan culus leh oo wax lagu beddeli karo. Laakiin, hal-qiyaas kale oo ka weyn ayaa jirta, oo ah nidaamka dhaqan-siyaasaddeedka ummada oo hab-qabiil ah salkiisu yahay.
SHAQEEYAHA IYO SHAQO LAAWE
Saadaashu bugcad kale oo aad u mihim ah ayey jaantuska saartay. Somaliland dadka intiisa badani ma shaqeeyaan, waxa la yidhaa shaqo la’aan baahsan ayaa jirta. Waxa inta badan shaqo abuurista afkaarteeda leh dawladda sida caamka ah. Dadka shaqada la’ ee camal la’aanta meehannaabayaa xooggooda codka xisaab ma galiyeen?
Dadka la warsaday oo dhan 650 qof, waxa ka shaqeeyaa waa 178 qof oo ka dhiggaysa 27.4% in ay shaqaynayeen, halka ay shaqo la’ aayeen 472 qof oo habka saamiga noqonnaysa 72.6%. Dadka dawladda iyo xisbiga Kulmiye taageersanaa ma ahayn kaliya inta shaqayneysa! Kulmiye waxa taageerray tiro dhan 106 qof amma saami dhan 59.5% inta shaqaysa. Halka inta aan shaqayn ee Kulmiye taageertay dhan tahay 225 qof amma 47.6%.
Sidoo kale xisbiga mucaaridka ah ee Waddani waxa taageerray shaqeeyayaal 65 qof oo u dhigma 36.5%. Halka shaqa laaweyaashu taageerray ay dhannaayeen 178 qof oo saami ahaan u dhigma 37.7%. Waxa aan go’aan gaadhin 69 qof oo u dhigma 10.6% uu isugu jira shaqeeya iyo kuwa aan shaqo hayn.
Haddaba waxa ay is-weydiintu tahay maxaa la odhan karaa way keentay in ay sida tan wax u dhacaan? Ma barnaamij xumo Waddani baa? Ma rajo Kulmiye dadka galiyey baa? Mise waa dhaqanka ummada oo ay beelnimo ammuuraheeda lagu jaan-gooyo?
Afeef: Waxa aan ka cudur-daarranayaa in xisbiga Ucid aan wax sample ah laga hayn, ma aha in ay dadku diiddan yihiin, ee waxa weeye in muran ka dhex jiro ilaa iyo haddana aannu murashax cad lahayn.
Mohamed Hagi Mohamoud. Department of Politics and International Studies. The University of Warwick. Email:m.hagi-mohamoud@warwick.ac.uk,mohamedhagi@gmx.co.uk
Taliska Ciidamada Xeebaha Somaliland Oo Qalab iyo Dhismeyaal Casriya Loo…
Dib u Milicso Maansada Saxansaxo ee Abwaan Gaariye Tiriyey 1987,…
Halkan Ka Daawo Wasaaradda Beeraha JSL Oo Bilowday Qaybinta Siidhka…
Walaal Dar Ilahay U Caawi Waxa Uu Kasoo Jeedaa Qoys…
Abwaan Xassan Daahir Ismaaciil Weedhsame Oo Soosaaray Maanso La Magac…
Madax-dhaqameed Iyo Xildhibaano Shacabka Reer Somaliland Ka Tacsiyadeeyay Marxuum Suldaan…
Maalqabeen Wargeyska The Guardian u Faahfaahiyey Hay’ad uu ku Taageerayo…
"Xisbiyada Qaranka Wakhtigoodu Waxa uu Ka ga Eegyahay 2022 ..."…
Daawo:Somaliland oo Tartan Galisay Gadiidka Gobolada Dalka u Qaadi Doona…
DAAWO:Maceeshada oo berbera Kor U kacday Iyo Cida leh masuuliyadda.
Hargeysa: DAAWWO ,Dhalinyaro is abaabulay oo Cunto siiya Dadka Dhimirka…
Deg Deg Madaxwynihii Dalka Chad oo la dilay iyo Goobta…
Halkan Ka Daawo W.Shaqo Gelinta Arimaha Bulshada Iyo Qoyska Aya…
Deg Deg DAAWO: Masuul ka Tirsan Dawladda Soomaaliya Ayaa Qarrax…
WASHINGTON , Dhagayso: Safiirkii hore ee Mareykanka ee Somalia oo…
DAAWO:Barnaamijka Hibaynta Ramadaanta iyo Hadiyada Dastuurka Xalqadii 7aad
Hoos Ka Daawo Xaaladda Muqdisho oo ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan…
Degdeg: Dawlada Kongo Oo Sheegtay in Farmaajo Ka Dalbaday Dhex-dhexaadinta…
Maleeshiyo-beeleedyo Dhiig Badan Ku Daadiyey Sool Oo La Kala Qaaday.